‘मोतीविन्दुमुक्त तुलसीपुर, उज्यालो तुलसीपुर’ – Health Post Nepal
‘मोतीविन्दुमुक्त तुलसीपुर, उज्यालो तुलसीपुर’
२०७५ चैत ८ गते १०:४५
दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकालाई मोतीविन्दुमुक्त बनाउन अभियान सुरु गरिएको छ । मोतीविन्दुको समस्या भएका सबै उपमहानगरवासीको उपचार गर्ने गरी अभियान सुरु गरिएको उपमहानगरपालिकाका सूचना अधिकारी झरेन्द्र खरेलले जानकारी दिए । उपमहानगरले ‘मोतीविन्दुमुक्त तुलसीपुर, उज्यालो तुलसीपुर’ अभियान अघि सारेको छ ।
उपमहानगरपालिकाकाअनुसार उपमहानगरमा करिब १ हजार ४ सय मोतीविन्दुका बिरामी छन् । आँखा अस्पताल र उपमहानगरपालिकाको सहकार्यमा निःशुल्क उपचार गरी मोतीविन्दुमुक्त उपमहानगर बनाउन खोजिएको उपमहानगरप्रमुख घनश्याम पाण्डेले बताए ।
उपमहानगरका स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख डा. गोकर्ण दाहालका अनुसार चालू आर्थिक वर्षभित्र ५ सयजनाको मोतीविन्दुको अप्रेसन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । पहिलो चरणमा तुलसीपुरका १ र २ नम्बर वडाबाट सुरु भएकोे अभियानलाई तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका सबै वडामा पु¥याइने उनले बताए । ५ वर्षभित्र तुलसीपुर उपमहानगरपालिकालाई मोतीविन्दुमुक्त उपमहानगरपालिका बनाउने योजना रहेको उनको भनाइ छ । राप्ती आँखा अस्पताल, नेपाल नेत्रज्योति संघलगायतको सहकार्यमा उक्त अभियान सुरु गरिएको हो ।
पहिलो चरणअन्तर्गत दुई दिनसम्म सञ्चालन गरिएको शिविरबाट ६७ जनामा मोतीविन्दुको अप्रेसन गरिएको उपमहानगरका प्रेस संयोजक वसन्त आचार्यले बताए । उनका अनुसार मोतीविन्दुको शल्यक्रिया गर्दा प्रतिव्यक्ति ८ हजार खर्च लाग्ने र त्यसमध्ये ५ हजार उपमहानगरले र ३ हजार आँखा अस्पतालले बेहोर्ने गरी खर्च व्यवस्थापन गरिएको छ ।
अभियानमा तिलगंगा आँखा अस्पतालका वरिष्ठ आँखारोग विशेषज्ञ डा. सन्दुक रुइत सहभागी छन् । उनले आँखासम्बन्धी विभिन्न रोगबाट बच्न नियमित आँखाजाँच गराउन आवश्यक रहेको बताए । अभियानमा तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर १ र २ का सयजना मोतीविन्दुका बिरामीको निःशुल्क अप्रेसन गरिएको स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख डा. दाहालले जानकारी दिए । उनका अनुसार पहिलो र दोस्रो दिन अप्रेसनसेवा लिने बिरामीलाई निःशुल्क चस्मा र औषधिसमेत वितरण गरिएको छ । डा. दाहालले अभियानलाई नगरका १९ वटै वडामा विस्तार गरिने बताए ।
अभियानको प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले शुभारम्भ गरेका थिए । त्यस अवसरमा मुख्यमन्त्री पोखरेलले संसार देखाउने आँखाको स्वास्थ्यमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताए । शरीरको महत्वपूर्ण अंगका रूपमा रहेको आँखालाई जोगाउन खानपानमा ध्यान दिन मुख्यमन्त्री पोख्रेलले आग्रह गरे । उनले आँखाको नियमित जाँच गराउनुसमेत सुझाए ।